China automated cascading sterilization retort ho an'ny indostrialy sakafo sy zava-pisotro am-bifotsy fanamboarana sy orinasa | Shenlong
1. Milamina ny valin-teninay:
4.Nampiasa rano fisotroana ambany, mitahiry etona sy rano water
1. Amin'ny alàlan'ny exchanger hafanana ho an'ny fampangatsiahana, ny rano fanodinana dia tsy mifandray amin'ny rano mangatsiaka mandritra ny dingana iray manontolo mba hisorohana ny fandotoana faharoa amin'ny sakafo. Ary hialana amin'ny simika fitsaboana rano. Amin'izay dia hahatratra ny vokan'ny sterilization amin'ny hafanana amin'ny fotoana fohy.
2. Rano kely fanodinana kely dia afaka mivezivezy haingana hanafana haingana ny mari-pana sterilization.
3. Ny fifehezana tsindry tonga lafatra dia miantoka ny fizotry ny famokarana manontolo, ny famoretana dia ampiharina mba hifanaraka amin'ny fiovan'ny tsindry anatiny amin'ny fonosana vokatra, ka ny fatran'ny deformation ny fonosana vokatra dia kely indrindra. Izy io dia mety indrindra amin'ny fonosana gazy sy tavoahangy fitaratra.
4. Ny rafitra fanaraha-maso SIEMENS mandroso sy milamina dia manome antoka fa ny mpanjifa dia afaka mahita ara-potoana ny rojom-panolorana eto amin'izao tontolo izao mba hampihenana ny ora fihenan'ny andro.
5.Ny tontolon'ny vy miorina amin'ny vatan'ny retort dia namboarina mba hanatsarana ny hamafin'ny tany sy ny fanoherana ny harafesina, indrindra ny fanoherana ny harafesin'ny klôro nampiana rano mangatsiaka.
Ny Retort / Autoclave dia azo noforonina arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa
Teo aloha: Mpivarotra varotra mixer mixer mixer tsara indrindra eto amin'ny indostrialy
Manaraka: Fanamafisana ny etona Autoclave Retort ho an'ny sardinina sy famerenan'ny sakafo vita amin'ny canona